Fahasamihafana eo amin'ny bakteria miabo tsara sy grama | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny bakteria miabo tsara sy grama | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Fandraisana / Siansa & natiora / Siansa / Biolojia / Mikrobiolojia / fahasamihafana eo amin'ny bakteria miabo tsara sy ny gram
Fahasamihafana eo amin'ny bakteria miabo tsara sy tsara
17 aprily 2011 Narotsak'i Samanthi
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny bakteria miabo tsara sy gram dia ny bakteria miabo tsara dia manana sosona peptidoglycan matevina, noho izany dia miseho amin'ny loko volomparasy izy raha misy bakteria peptidoglycan manify kosa ny bakteria ratsy, noho izany dia miseho amin'ny loko mavokely amin'ny faran'ny teknika fandotoana gram .
Ny bakteria dia prokaryote eny tontolo eny izay tsy mitovy amin'ny sela sy mikraoskaopy. Izy ireo dia an'ny Kingdom Monera miaraka amin'ny Archaea. Ankoatr'izay, manana fikambanana finday tena tsotra izy ireo. Amin'ny rafitra, tsy misy efitranony anatiny izy ireo; vatan-kazo sy taolana hafa mifatotra amin'ny membrane. Ankoatr'izay, ny bakteria dia azo sokajiana amin'ny toetra marobe toy ny endrika, makiazy génétique, firafitry ny rindrin'ny sela, isan'ny flagella, sakafo, fanehoan-kevitra biokimika, sns. Araka ny fandokoana grama, misy sokajy bakteria roa toy ny bakteria miabo tsara sy gram ratsy. Ireo vondrona bakteria roa ireo dia tsy mitovy amin'ny fifangaroan'ny rindrin'ny sela. Noho izany, mandoko amin'ny loko samihafa izy ireo mandritra ny teknikan'ny fandokoana grama.
2. Inona no atao hoe bakteria miabo Gram
3. Inona no atao hoe bakteria miiba Gram
4. Ny fitoviana eo amin'ny bakteria tsara sy tsara
5. Fampitahana mifanila - Gram Positive vs Gram Negative Bakteria amin'ny endrika Tabular
Inona no atao hoe bakteria miabo Gram?
Ny bakteria miabo Gram dia vondrona bakteria izay mandoto loko volomparasy amin'ny teknika fandokoana grama. Ny antony ao ambadiky ny fandokoana loko volomparasy dia satria bakteria miabo tsara dia manana sosona peptidoglycan matevina ao amin'ny rindrin'ny sela. Raha ny mahazatra, bakteria peptidoglycan misy bakteria miabo tsara dia manodidina ny 20-80 nm ny hatevin'ny asidra teichoic no eo aminy.
Sary 01: bakteria miabo Gram
Ny sosona peptidoglycan matevina dia mitazona ny tasy voalohany, dia ny volomparasy volomparasy; noho izany, miseho amin'ny loko volomparasy na volomparasy volomparasy eo ambanin'ny mikraoskaopy. Na dia manala ny tasy voalohany aza ny mpitsabo decolourizing, ny stain dia tsy miala tanteraka amin'ny sosona peptidoglycan matevina. Ny karazana Staphylococcus, Streptococcus, Bacillus, Corynebacterium, Listeria ary Clostridia dia ohatra sasany amin'ny bakteria miabo tsara.
Inona ireo bakteria ratsy?
Ny bakteria miiba Gram dia vondrona bakteria manana sosona peptidoglycan manify ao amin'ny rindrin'ny sela. Noho izany dia tsy afaka mitazona ny tasy voalohany izy ireo. Mampiavaka azy, ny bakteria miiba gram dia manana membrane fanampiny antsoina hoe membrane ivelany, izay tsy misy bakteria miabo gram. Ary koa, ity membrane ivelany ity dia misy lipopolysaccharides. Ankoatr'izay, na dia misy membrane ivelany aza, dia mihasimba raha vao apetraka ny decolorizer. Avy eo, lasa sosona ilay sosona peptidoglycan, ary miala tanteraka amin'ny rindrin'ny sela ny tasy volomparasy.
Sary 02: Bakteria maharatsy ny gram
Noho izany, bakteria ratsy gram dia miseho amin'ny loko stain faharoa izay mavokely. Rehefa ampitahaina amin'ny bakteria miabo gram, ny bakteria miiba gram dia manohitra kokoa ny antibiotika mikendry ny rindrin'ny sela. Izany dia vokatry ny fisian'ny membrane ivelany. Ankoatr'izay, ny rindrin'ny sela dia misy sosona roa, ary misy habaka periplasma ao amin'ny rindrin'ny sela. Ary koa, ny rindrin'ny sela dia tsy mitovy sy tsy dia henjana raha oharina amin'ny bakteria miabo gram. Escherichia coli , Pseudomonas , Neisseria , Chlamydia , dia sasany amin'ireo bakteria miiba gram.
Inona avy ireo fitoviana misy eo amin'ny Bakteria Gram Positive sy Gram Negative?
Ny Gram Positive sy ny Gram Negative Bakteria dia manana fandaminana sela mitovy amin'izany.
Ary koa, izy roa dia zavamiaina bitika prokaryotika izay manana kapsily.
Ary, samy manana chromosome tokana izy ireo ary eny rehetra eny.
Ankoatr'izay, izy roa dia mety misy plasmid ho ADN extrachromosomal.
Ankoatr'izay, samy miteraka firaisana ara-nofo amin'ny alàlan'ny varotra mimari-droa.
Toy izany koa, izy roa dia samy miova, transduction ary conjugation.
Ankoatr'izay, ny bakteria miabo Gram Positive sy Gram Negative dia voasakan'ny antibiotika.
Ny rindrin'ny sela dia misy peptidoglycan.
Ary koa ny karazana bakteria dia samy manana ny sosona amboniny (S layer).
Izy ireo dia mamaly ny fomba fandokoana grama.
Ankoatr'izay dia miteraka aretina amin'ny olona sy zavamaniry ary biby izy ireo.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny bakteria miabo Gram Positive sy Gram Negative?
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny bakteria miabo tsara sy gram dia ny bakteria miabo tsara dia manana sosona peptidoglycan matevina ao amin'ny rindrin'ny sela ary bakteria ratsy kosa kosa manana peptidoglycan manify ao amin'ny rindrin'ny sela. Ankoatry ny sosona peptidoglycan, bakteria miiba gram dia manana membrane ivelany ary tsy misy bakteria miabo gram izany. Noho izany, tsy mitovy ihany koa ny bakteria miabo tsara sy gram. Ankoatr'izay, ny bakteria ratsy gram dia manana habaka periplasmika ary sosona roa ao amin'ny rindrin'ny sela raha tsy misy habaka periplasmika kosa ny bakteria gram tsara ary manana rindrina sela henjana ary misy rindrina aza izy ireo.
Ity infographic manaraka ity dia milazalaza zava-misy bebe kokoa momba ny fahasamihafana misy eo amin'ny bakteria tsara sy tsara gram.
Famintinana - Gram Positive vs Gram Negative Bakteria
Miankina amin'ny bakteria no maka sy mitazona ny tasy voalohany; volomparasy volomparasy mandritra ny fandotoana grama, misy karazana bakteria roa dia ny gram tsara sy ny gram ratsy. Ny bakteria tsara dia manana sosona peptidoglycan matevina ao amin'ny rindrin'ny sela ary bakteria ratsy kosa manana sosona peptidoglycan manify. Io no fahasamihafana lehibe eo amin'ny bakteria miabo tsara sy gram. Noho io fahasamihafana eo amin'ny rindrin'ny sela io dia misy pentina bakteria miabo amin'ny loko volomparasy raha misy pentina bakteria ratsy kosa miloko mavokely. Ankoatr'izay, ny bakteria miiba gram dia manana membrane ivelany raha tsy eo ny bakteria miabo gram. Noho ny fisian'ny fonosana ivelany, ny bakteria miiba gram dia tsy mahazaka antibiotika amin'ny rindrin'ny sela raha toa kosa ka misy bakteria miabo tsara. Noho izany, ity dia mamintina ny fahasamihafana misy eo amin'ny bakteria miabo tsara sy gram.
1.Vidyasagar, Aparna. “Inona avy ireo bakteria?” LiveScience, Purch, 23 Jolay 2015. Hita eto
2.Bhimji, Steve S. “Bacteria, Gram Positive.” StatPearls [Internet]., Tranombokim-pirenena amerikana momba ny fitsaboana, 6 Desambra 2017. Hita eto
3. Bakteria tsy mampidi-doza. Hita eto
1. ”photomicrograph, spherical, cocci, gram, positive, staphylococcus aureus, bakteria, nohalehibeazina, 320x” nataon'i Dr. Richard Facklam, USCDCP (Public Domain) via pixnio
2. ”Pseudomonas aeruginosa Gram” Nosoratan'i Y_tambe - fisie Y_tambe, (CC BY-SA 3.0) via Commons Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny mould sy ny malefaka Fahasamihafana eo amin'ny bobongolo sy ny masirasira Fahasamihafana eo amin'ny sterilization sy ny famonoana otrikaretina
hoy i barkha
28 Aogositra 2011 amin'ny 8:31 maraina
somary feno hlpful
Fahasamihafana eo amin'i Sauna sy i Jacuzzi
Fahasamihafana eo amin'ny Bigotry sy ny fitsarana an-tendrony
Fahasamihafana eo amin'ny ViewSonic ViewPad 10pi sy Apple iPad 2
Fahasamihafana eo amin'ny Mpanjaka Cobra sy Cobra
Fahasamihafana eo amin'ny leeks sy tongolo